Samsung oo soo saaraysa Galaxy Note 7 Phablet aad u furid karo indhahaaga - Rule News
Samsung oo soo saaraysa Galaxy Note 7 Phablet aad u furid karo indhahaaga
khamaar ah soo saaraha smartphone Korean on sifooyinka-dhamaadka sare, qalabka dhalooyinka iyo premium qalooca lagu baddalo ugu dambeeyay ee phablet abuure category
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Samsung Galaxy Note bandhigaya 7 phablet aad u furid karo indhahaaga” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Wednesday 3rd August 2016 07.30 UTC
Samsung Galaxy Note ee ugu dambeeyay 7 phablet waa mid ka mid ah casriga ah marka hore in markab la scanner iris ah in ka akhrisan kartaa indhahaaga iyo aad ha galay telefoonka ee seconds.
Markuu been abuurtay phablet ee 2011 iyadoo Galaxy Note asalka, Samsung ayaa u boodboodeen Note ah 6 inay soo qaadaan line Note in par tiro ee ay line Galaxy S7 caan.
phone cusub qoreysa isla-dhamaadka sare, design premium iyo dhista sameeyey Galaxy S7 Edge caanka ah, la taam ah iyo dhammeeyo ka khayr badan mid ka mid ah casriga kale shirkadda Korean ee.
gudbiye An infrared aqbalana for iskaanka iris biiro camera sawir hore jeeda sare ee Note Galaxy 7. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Laakiin ay feature iibinta ugu weyn waa ikhtiyaar jismiyeed cusub oo ah qaab ah scanner iris infrared in qaadataa kaliya ilbiriqsi qotomiyey iyo furid telefoonka dayi isha midkood. Waxaa weli scanner faraha ka yar button guriga, oo koob-wearers maqsuud doonaa sida ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in meesha laga saaro koob ama contact lenses si ay u sameeyaan shaqo scanner iris ah.
Note The 7 sidoo kale caddaymaha la mid ah u Edge Galaxy S7, oo ay ku jiraan ay rating taas oo biyuhu IP68 moolalka of 1.5 for 30 daqiiqo, camera 12-megapixel dhabarka ah, 4GB ee RAM iyo 64GB of kaydinta, iyadoo booska card microSD waayo, isaga oo intaa raaciyay in ka badan a.
The Galaxy Note 7 waa smartphone ugu horeysay Samsung in la isticmaalo isku xira USB-C cusub. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Galaxy Note The 7 ee geesaha screen qalooca ka sameeyaan mid ka mid ah telefoonada narrowest la screen 5.7in a, taas oo macnaheedu yahay waxa ay wax badan ka sahlan in la qabto waa. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
phablet waxay leedahay shaashad 5.7in Bawdada HD, USB-C, iyo dhafan stylus S-qalinka, taas oo hadda biyuhu iyo shaqeyn doonaan marka shaashadda waa qoyan. Samsung ayaa sidoo kale u sameeyey daah ah diyaar u firfircoon heerka kala duwan video cusub sare kaas oo diidanaa soo baxay guud ahaan telefishannada-dhamaadka sare, oo ay taageerayaan content ka adeega video Ra'iisul Amazon ee, iyo kuwo kale.
Samsung ayaa sidoo kale isbedel ku Android Note 7 ee 6.0.1 software Marshmallow, ay ka mid yihiin awood u leh inay ka screen soo jeedin video galay gifs si toos ah, iyo qalab kale oo kala duwan stylus la xiriira, ay ka mid yihiin awood u leh inay ku qor on screen casriga ah ee marka ay hurdo aan haysan si ay u toos.
The stylus S-Pen ayaa 4,096 cadaadis heer dareen iyo hadda biyuhu, shaqeeya shaashadda xitaa marka qoyan – horumarka ah in Samsung qaaday saddex sano si kaamil. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The Galaxy Note 7 qaybsada hore la safeeyey qalooca iyo dib cidhifyada ee Edge Galaxy S7, taas oo ka dhigaysa waxay dareemaan premium iyo ergonomic in gacanta. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Note 7 ee USB-C dekedda u baahan version cusub ee shirkadda ee Gear VR headset, oo Samsung ayaa sheegtay in su'alaha u noqon raaxo badan in ay xirtaan iyo isticmaalka. Gear VR cusub ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay dekedda ah siyaada dhinaca iyo haayay kantaroolida.
Samsung ayaa sheegay in uu leeyahay in ka badan 1 million users of gii kala duwan ee ay headset Gear VR, la 500,000 lagu iibiyo Midowga Yurub, oo waxay ka dhigtaa mid ka mid ah la gashto VR-ugu wanaagsan ee lagu iibiyo.
headset dambeeyay Samsung ee VR Gear ayaa uqaabaynta godad isha raaxo kordhay iyo gacanta fududeeyey. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Samsung waxaa lagu xiraa in dagaalka ah meesha bannaan ee smartphone-dhamaadka sare la Apple xafiiltamaan, kaas oo dhawaan uun bilaabay inuu iibiyo phablets. Sida weyn-screen casriga ah ayaa noqday iyo aad u badan oo caan ah – qeybta ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya ee Europe – Shirkadaha ayaa ku dhibtooday inuu kala phablets sare-jaban ay hawlo badan ka casriga ah ka jaban badan-baaray ugu horayn loogu talagalay isticmaalka warbaahinta.
Shirkadda Korean ayaa rajeyneysa in ay diiradda on hawlaha stylus, qalabka premium waana Knox madal ammaanka, kaas oo la istcimaalayo labadaba faraha iyo iris scanners sheegtay in mid ka mid ah casriga ugu ammaan iyo fududahay in la isticmaalo la heli karo, ka kale ka jaban jiido doonaa macaamiisha.
The Galaxy Note 7 diyaar noqon doono UK on 2 September.
The Galaxy Note 7 imanaya saddex midabada, madow, lacag midab / dahab iyo macdan ah nuurka u ah buluug ah oo leh dhinac dahab. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
33987	3 Android, Qodobka, Qalab, Telefoonada Mobile, News, Phablets, Samsung, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology, UK Technology
← Ilmaha waa Full of Cannabis? The Five Claims Most hungo ah oo ku saabsan maskaxda Dyson 360 Eye Review Vacuum →